China N'ogbe Button ngwa Suppliers, Manufacturers - GRX mmanya (HONG Kong) CO., LTD.
.Lọ >Ngwaahịa >Button ngwa
M-bọtịnụ ala shei
Ala ala nke bọtịnụ a bụ nke igwe anaghị agba nchara na ọla kọpa. The ụlọ ọrụ mechaa ISO9001: 2008 quality management usoro asambodo. Ọ nwere ọtụtụ nchọpụta Kemịkalụ. Ngwaahịa niile abụrụla SGS ma tinye ya n'ahịa mgbe ọ gafere ule ahụ. Ogo nke ngwaahịa a dị. Usoro nchịkwa, mmelite na-aga n'ihu nke akụrụngwa dị iche iche na akụrụngwa ngwanrọ, ma gbalịsie ike ijide ahịa na mma.
Nke a aluminum mbọ bụ nke aluminom. The ụlọ ọrụ mechaa ISO9001: 2008 quality management usoro asambodo. Ọ nwere ọtụtụ nchọpụta Kemịkalụ. Ngwaahịa niile agafeela ule SGS ma tinye ya n'ahịa ahụ mgbe ọ gafesịrị ule ahụ. E webatara usoro njikwa ngwaahịa zuru oke. Melite ngwaike dị iche iche na akụrụngwa ngwanrọ, ma gbalịsie ike ijide ahịa ahụ na mma.
A na-eji plastik mee isi roba a. The ụlọ ọrụ mechaa ISO9001: 2008 quality management usoro asambodo. Ọ nwere ọtụtụ nchọpụta Kemịkalụ. Ngwaahịa niile abụrụla SGS ma tinye ya n'ahịa mgbe ọ gafere ule ahụ. E webatara usoro njikwa ngwaahịa zuru oke. Melite ngwaike dị iche iche na akụrụngwa ngwanrọ, ma gbalịsie ike ijide ahịa ahụ na mma.